Ikhaya leDowntown Flagstaff elinombono
(263 okushiwo abanye)
Flagstaff, Arizona, i-United States
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Paul And Meredith
Ikhaya lethu liseduze nezindawo zokudlela kanye nezindawo zokudlela, ukubukwa okuhle, imisebenzi elungele umndeni, kanye nempilo yasebusuku. Ngaphansi kwemizuzu eyishumi ukuhamba ngezinyawo ukuya edolobheni laseFlagstaff. Uzoyithanda indawo yethu ngenxa yesikhala esingaphandle, umakhelwane, nekhishi. Indawo yethu ilungele izithandani, abantu abazihambela bodwa, abahambi bebhizinisi, kanye nemindeni (enezingane).
Sifuna ukwenza ukuhlala kwakho kube lula futhi kukhululeke ngangokunokwenzeka noma ngabe ungumbhangqwana, umndeni omncane noma umhambi webhizinisi. Ikhaya alihlali izivakashi ezingaphezu kwezi-4. Leli yikhaya elidala kakhulu (elisanda kulungiswa) endaweni eyingqopha-mlando futhi liseduze namathrekhi wesitimela, okusho ukuthi kunomsindo wesitimela futhi kungase kuthinte abantu abalalayo. Iqoqo lezitebhisi liholela ekungeneni kwendlu futhi ukuhamba kufanele kucatshangelwe.
• Ikhishi elihlome kahle futhi eligcwele (ibhodwe lekhofi likagesi, iketela letiye) itafula lokudlela laba-2, isiqandisi, uhla, kanye nemicrowave.
• Igumbi lokugezela (ishawa eqondile, amathawula nemikhiqizo yokugeza).
• Igumbi lokulala (umatilasi wendlovukazi).
• Igumbi lokuhlala/lokuhlala (umbhede usofa
.Idekhi yangaphandle enokubukwa okuhle.
Ikhaya liyazenzela ngakho-ke izitsha zingumthwalo wesivakashi ukuzihlanza (siyaxolisa ngomshini wokuwasha izitsha).
4.90(263 okushiwo abanye)
4.90 · 263 okushiwo abanye
Le ndlu isemgwaqweni ongagandayiwe emabhuloki ambalwa ukusuka enhliziyweni yedolobha laseFlagstaff. Kuthulekile futhi ekugcineni komgwaqo kunegceke elikhulu elinamahlathi.
Ibungazwe ngu-Paul And Meredith
I'm an Arizona native and proud to call Flagstaff home for 30+ years! I love the outdoors and all that the Flagstaff area has to offer. Camping, boating, and hiking consume most of…
Indlu izimele yodwa kodwa iseduze nekhaya esihlala kulo, ngakho nakuba siseduze, nina njengezivakashi ninendawo yenu evikelekile nobumfihlo. Sizimisele ukukusiza ngokuhlala kwakho ngokukunikeza izincomo zomuntu siqu. Siyatholakala ngokuthumela imiyalezo ngesikhathi uhlala. Umgomo wethu uwukusiza ukuba uzizwe usekhaya, unolwazi ngalokho indawo ekunikezayo nokubona ukuthi uyabuya futhi.
Indlu izimele yodwa kodwa iseduze nekhaya esihlala kulo, ngakho nakuba siseduze, nina njengezivakashi ninendawo yenu evikelekile nobumfihlo. Sizimisele ukukusiza ngokuhlala kwakho…
UPaul And Meredith Ungumbungazi ovelele
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-R1589.
Hlola ezinye izinketho ezise- Flagstaff namaphethelo